ဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်ပုံလေးတွေ မျှဝေခြင်း...! | အိမ်လွမ်းသူ...
သင်္ကြန်မှာ ဘလော့တကာ ရေလျှောက်ပတ်ရင်းဖြင့် တွေ့လို့ယူလာတဲ့ ပုံလေးတွေပါ...!Software လေးတွေ မတင်ချင်သေးတာနဲ့ ဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်တာပါ...! ဘယ်ဘလော့ကရလာမှန်းကို မသိတော့ဝူး...!အခုလို ဗုဒ္ဓပုံလေးတွေ တင်ပေးထားတဲ့ ဘလော့ပိုင်ရှင်ကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်...!ကျွန်တော် ခွင့်မတောင်းပဲတင်မိတာ တောင်းပန်ပါတယ်...!Post လေးကိုဖြတ်ပေးဆိုရင် ဖြတ်ပေးမယ်နော်...! အနော့်အိမ်ကို လာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်မျှဝေပေးလိုက်တာပါ....!
2 Response to ဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်ပုံလေးတွေ မျှဝေခြင်း...!
နှစ်သစ်မှာ ဗုဒ္ဒဖြစ်တော်စဉ်ပုံလေးတွေကြည့်ရတာ အရမ်း အေးချမ်းတယ် သယ်ရင်းရေ......ကျေးဇူးပါ.....